Madda Walaabuu Press: Oromoon Goocha Dr. Gemechis Dasta Buba hundi beekee dhaabuu qaba
Dr. Gemechisi Warii Siyyasa ilee haa soban, haa dogogoran, of ilee hajalatan, yakki isaan salphadha. Warii atii giduu teesuu kun hundi isaan Tikka wayyane fi diina Oromoo wara hamoodha. Getachew Reda, Addisu Gebera Egizhaber fi Komishner Lama Magarsa Fe Getachew Afesfa Tikka wayaneti. Dr. koo mal tatee amanunun dadhadabem, namoon guyya guyyan na bareesu hin amanun jeedhem ilmii leencaati intala leencaa of birra qaba Oromoo hin gurguru wayyanet harka hin latuu jeedhen siif falmadhe, Sagale waqayootu birra jira, Sagalee Afura Oromoo Gudiina Tumsatuu birra jira, diiga Bara Tumsatuu birra jira jeedhen siif falmadhee. Geme maltuu sii xuuqee?, maloo Diigi Gudina fi Baroo mal siin jeedhuu, Obbo Nagasan enyutuu ajeese jeedhe sii gafana deebi na dhorkateem. Obbo Nagasan du’aa waqayoo du’aan miti kana atuu beektami.
Dr. Koo wayee dhigga ijoolee Oromoo 500 waqayoo mal jeedha jeete yaada atoo na caalaa amanta,? Wayee Ijoolee Mada’aan harki isaan ramayee jiruu yadeeta? Ini Harki isaa ramayee Dr. Solomon Ungashe malaqa kadhatuuf Maqan isaa sii fakata Gemechisi jeedhama. Jalala fi kabajan Maati Gundina fi Baroo Tumsaf qabuu mal goodhuu? Oromoo Million 50 siiti gadeera beek, Wariii caalisee irra ana isaa dhuga dubatee wayaa nami siitii hin gadiin hin jiru. Hormi Afaan Horman bareese ani amoo afaan diina wayee Oromoo bareesu hin feedhuu, Bilbila keen dhabee malee kana iyuu media irrati hin baleesuu ture, dhiiga Afuura Oromootuu sii bira jira afuura Luba Gudina Tumsa. Maliif waqayoon nu jibisifta ? Maliff Amanta waqarati nu dhabsisifta? Maliif Luba Gudina hin tatuu? Lensan fi Kulanin maliin siin jeedhu? Namoon waan bayee heedu na bareeseni Ani garuu Afura Luba Gundina fi hayyama isaa malee hama tokko ilee hin dubadhu. Ani Luba Gubina akka waqatin amana maati isaa jeequu hin barbaduu afuura isaatu nati gada jeedhen yaada atii kana maliif hin yanee? Waqayoon yoo sodachuu batee Dhiiga Luba Gudina fi Baroo sodadhu diina Oromoo jala hin deemin waan hunda qabda Oromoo hin dhabini, Abaa fi Haatii kee Oromoof wara midhamnidha. Isaa ilee Kabaja gudaa qabuu Hiriyaa Abiyuu Galata fi Iseaq Angoseeti lakii dhisii? Dukanan Duba Dirama Dhaabaa Wayeesa dhageefadhuu.
Sii deefachuuf malee sii yakkuuf miti, Oromoof waan ta’uu maluu nan falmadha. Oromoo na ofkalcha Waraaqisa qubee Jenereshin waan diigu nan falmadha. Barii kun bara tefozooti ani Oromumaa koof Tefozoo hin barbaduu Harki koo diiga fi malaqa hin qabu. Wal gorsuu wayya wal hamachuu irra.